Narotsany tamina “cash point” iray: lehilahy iray nahatrarana vola sandoka 200 000 Ar sy odigasy | NewsMada
Teo am-panamarinana ny isam-bola nalefany no tsikaritry ny tompona kioska (cash point) fa hay vola sandoka ireo roa hetsy ariary nalefan’ity lehilahy iray ity. Voasambotra tetsy Anosy, omaly, izy io rehefa nifanenjehana ka natolotra ny polisy. Mbola nahitana odigasy sy bala 9 mm koa tao anatin’ny moto nentiny.
Tsy afa-bela! Voasambotry ny polisy avy ao amin’ny compagnie urbaine d’intervention, omaly tamin’ny 9 ora sy 30 mn teo amin’ny HJRA Anosy, ny lehilahy iray 31 taona nahatrarana vola sandoka. Araka ny fampitam-baovao voaray avy amin’ny polisy, tonga tamina kioska (cash point) fandefasana vola ity lehilahy ity ka nandefa vola 2 hetsy Ar nataony tao anaty valopy fotsy iray. Rehefa lasa ny vola, nanamarina ny isam-bola ny tompon’ilay “cash point” ka tamin’izany no nahitany fa sandoka avokoa ny vola nomen’ity lehilahy nandrotsaka vola ity. Niantso ity lehilahy ity avy hatrany ilay tompona kioska ka nodiany tsy fantatra fa lasa izy namelona ny moto-ny ihany. Nivoaka avy hatrany ny tompon’ilay kioska ka nanenjika azy ka tratrany ihany izy. Notazoniny ka tsy afa-nihetsika intsony ilay mpanao trafikana vola sandoka. Polisy niasa teo akaikin’ny HJRA teo no nanatona nijery ny zava-misy ka voamarina fa vola sandoka tokoa ilay vola tany amin’ity lehilahy ity.
Nahitana odigasy tao anaty moto…
Niroso tamin’ny fisavana ity lehilahy ity avy hatrany ny polisy ka nahitana odigasy marobe tao anatin’ny moto nentiny, niaraka amin’ny “cartouche” 9 mm iray sy vola sandoka 5 000 Ar iray. Nosamborina izy ka nentina nihazo avy hatrany ny kaomisaria foibe eny Tsaralalàna hanohizana ny fanadihadiana rehetra. Ny polisin’ny Sut no mandray an-tanana ny fanadihadiana rehetra. Lasibatra hatrany ireny “cash point” ireny tato ho ato, raha tsy tafihin’ny jiolahy dia iharan’ny fanapariahana vola sandoka. Tsy kely lalana ny mpanao ratsy, koa aoka ho mailo hatrany manoloana ny asan-jiolahy sesilahy tato ho ato izay.